Posted by Tranquillus | Nov 26, 2018 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Waxaa laga yaabaa in lagugu martiqaado dhacdo xirfadle ah, laakiin waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad ka qaybgasho. Xaaladahan, dabcan waa inaad u sheegtaa qofka ku soo diray martiqaadka, adoo si rasmi ah u dhigaya diidmadaada a email. Maqaalkani waxa uu ku siinayaa qaar ka mid ah tabo aad ku qorto iimaylka diidmada martiqaadka dhacdada xirfadeed.
U sheeg diidmada
Markaad heshid martiqaad, guud ahaan waxaad filaneysaa in aad ogaato haddii aad xor u tahay maalintii si aad ugu jawaabto haa ama maya qofki kugula hadlaya. Xaaladda diidmada, waraaqdaada waa in ay ahaato mid wanaagsan si aysan u siin fikradda ah inaadan kaqeyb qaadan sababta oo ah dhacdadu maaha mid xiiso leh.
Qaar ka mid ah talooyin si aad u muujisid diidmada email ahaan
Talada ugu horeysa ee aan ku qorno email-diid rasmi ah waa in la caddeeyo diidmadaada, iyada oo aan lagama maarmaanka u ahayn faahfaahinta, laakiin ku filan si aad u muujiso qofkaad dooneysid in diidmadaadu ay ku jirto iimaan wanaagsan.
Ku bilow emailkaaga adigoo u mahadcelinaya qofka aad waraysanayso martiqaadkiisa. Ka dibna caddayn diidmadaada. Inta lagu jiro e-maylka, sii joogso oo anshax. Ugu dambeyn, samee raali gelin oo ka tag fursadda furan waqtiga xiga (iyada oo aan wax badan samayn).
Waa tan a email template in la muujiyo diidmadaada casuumad xirfadeed, iyada oo loo marayo tusaalaha casuumada quraacda si loo soo bandhigo istiraatiijiyadda dugsi-ku-celiska:
Mawduuca: Casuumaad quraacda [taariikhda].
Waad ku mahadsantahay martiqaadkaaga quraacda quraacda ee quraacda [date]. Nasiib darro, ma awoodi doono inaan tago sababtoo ah waxaan la kulmi doonaa macaamiisha subixii. Waan ka xumahay inaanan halkan joogi karin sababtoo ah waxaan sugayay sannadkan sanadkan bilowgiisa.
[Saaxiibkiis] wuu ka qaybqaadan karaa meeshayda oo wuu iga soo warrami karaa wixii lagu yidhi intii lagu jiray kulankan aan rasmiga ahayn. Waxaan kuugu jiraa gacantaada waqtiga soo socda!
Email template si aad u muujiso diidmada Agoosto 26th, 2020Tranquillus
horeEmail template ah oo ku dhawaaqaya ka qaybqaadashadaada kulan kulan
socdaEmail template si aad raaligelin ugu noqoto saaxiib